Faroole oo Sheegay in Labada Shariif ay Naftood ula soo Carareen Garowe | Moment Union Somali Diaspora
Garowe (RBC) Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland C/raxmaan Maxamuud Faroole ayaa hadal uu ka jeediyey gabagabadii kulankii loogu magacdaray ‘MABAADII’DA GAROWE’ ee afarta maalin ka socday magaalada Garowe ayaa sheegay in labada Shariif ee hogaamiya DKMG inay naftooda ula soo carareen magaalada Garowe ka dib markii xildhibaanada baarlamaanka ay xilkii ka qaadeen Shariif Xasan.
C/raxmaan Faroole oo hadalo aad u kulul ka jeediyey munaasabada gebagabada shirka ayaa ereyo aad u qaawan ku weeraray hgaanka DKMG gaar ahaan labada Shariif oo markaasi isaga dhinac fadhiya.
“Qolooyinka reer galbeedka ee Soomaalida Ethiopia ayaa waxaa laga sheegaa waxaa la yiraahdaa bad may arag weligood. Nin baa bad arkay baa la yiri markaasuu yaabay waxay waxani yihiin biyana ma ahan, waa uu dhdhenshay misana waa dhanaan yihiin wuxuina wax xuduudkooda muuqdo mahan, wuxuu yiri NIN BAD ARKAY WAXNA ARAG WUXUU SHEEGANA MA YAQAAN” ayuu yiri Faroole oo tusaalahaasi u soo qaatay labada Shariif.
Wuxuu ku sii daray isagoo hadalkiisa sii wata:
“Dhowr iyo labaatan sano niman burbur ku noolaa oo maalin walba baarlamaankii la jabsanayo oo iyagii xabbad lala kortaagan yahay oo halkan naf kula soo cararay oo afartii beri ee ay joogeen ku nasanaayey, fikirkooda iyo dhibaatada heysata ninkii arkay waxna arag wuxuu sheegana garan maayo” ayuu ku sii daray iyadoo taageerayaashiisa ay si wyn ugu sacabtumeen.
Madaxweyne Faroole ayaa si cad u sheegay in si adag loo wada hadlay mudadii afarta maalin ee kulamada ay ka socdeen magaalada Garowe isagoo qiray in isaga iyo labadaSHARIIF oo doodaha ay u dhexeeyeen ay isqabteen laakiinse markii dambe ay wax isku afgarteen iyadoon la soo dhexgelin.
Soomaalida ceyrta ka qaadata Europe iyo Mareykan
“Waxaan u daneyneynaa inay dawlad u dhisanto kuwa qoxootiga ah ee melaha CEYRTA ku jira iyo kuwa xuduudaha ka talaabay ee markay wareereen ay kuwa wadaadada ahi ka soo dhaadhicinayaan inay isqarxiyaan” ayuu markale yiri C/raxmaan Faroole oo ka hadlayey Soomaalida dibadaha ku nool.
Faroole wuxuu sheegay in kulanka Garowe uu ahaa mid loogu gogol xaarayo dawlad Soomaaliya ka hirgasha, isagoo sheegay in qaabka 4.5 uu noqday xal laakiin isaga dhinaciisa uusan ku soo xuli doonin qaab qabiil laakiin uu isaga keeni doono.
Yaa masuuliyad qabanaya?
C/raxmaan Faroole ayaa markale weerar afka ah ku qaaday dadka maamulada xilalka ka haya ee balwada isticmaala kuwaasoo uu sheegay inaysan u suurtagali doonin inay xil dambe qabtaan ama ay xitaa baarlamaanka ku soo biiraan.
Wuxuu ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka ee iskhilaafsan inay FADHI KU DIRIRKA JOOJIYAAN ee ay yimaadaan baarlamaanka hadey dood rabaan, siduu hadalka u dhigay.